Tijaabada xawaaraha ee udhaxeysa iPhone X iyo iPhone XS Max | Wararka IPhone
Imtixaanka xawaaraha ee u dhexeeya iPhone X iyo iPhone XS Max
Sidii caadada u ahayd markasta oo terminal cusub suuqa soo gaadho, waxaa lagu sameeyaa tijaabooyin taxane ah si loo hubiyo iska caabinta xarunta iyo tan xawaaraha hawsha marka loo eego kuwii ka horreeyay. Caqli ahaan IPhone-ka cusub ayaa ah kuwa aan ka reebanayn, shalayna waxaan ku tusay a imtixaanka dulqaadashada ee iPhone XS iyo iPhone XS Max, maanta waa adiga markiisa tijaabada xawaaraha.
Iyadoo la tixgelinayo in labada terminaal ay maamulayaan isla processor-kooda oo ay isku le'eg yihiin RAM, isbarbardhigga u dhexeeya labada terminaal waa macquul. Si kastaba ha noqotee, iibsashada iPhone X ee iPhone XS Max macno badan ayey samaynaysaa, si loo hubiyo haddii isbeddelka processor-rada Apple ay weheliyaan GB-ka dheeriga ah ee RAM ee ay iPhones-ka cusub leeyihiin la arki karo iyo in kale.
Waxaa jira baloogyo badan oo sidayada oo kale ah oo aanan kugula talinaynin inaad bedesho boosteejooyinka nooc kasta oo cusub haddii aad leedahay iPhone X, maadaama isbeddelada ay yar yihiin, iyadoo aan loo eegin processor-ka iyo xusuusta.
Wax walba Apple Pro ayaa sameeyay a isbarbardhiga waxqabadka ee u dhexeeya iPhone XS Max iyo iPhone X, halkaas oo waqtiga ay wada qaateen labada terminaal si ay u furaan codsiyo taxane ah oo laga soo qaaday xoqdo ay ku soo beegantay oo mar la furay, in dib loo furo markii ay horeba ugu jireen xusuusta.
Sidii la filayay, iPhone XS Max ayaa garaacday iPhone X illaa hadda. Tani waxay u badan tahay inay sabab u tahay oo keliya GB-ka dheeriga ah ee RAM ee ay leedahay, laakiin sidoo kale hagaajinta ay Apple ka hirgelisay processor-ka cusub ee A12 Bionic. Halka farqiga ugu badan ee la ogaan karo yahay marka la dhoofinaayo fiidiyow leh 4k tayo leh, halkaasoo iPhone XS Max ay qaadato 34 ilbiriqsi ka yar in la dhoofiyo marka loo eego iPhone X.
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka IPhone » Terminalka IPhone » iPhone Xs » Imtixaanka xawaaraha ee u dhexeeya iPhone X iyo iPhone XS Max